प्रधानमन्त्री ओलीले गरे घोषणा अव एक-दुई जना साँसद उभिएकै भरमा संसद अवरुद्ध नहुने ?::Pathivara News
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे घोषणा अव एक-दुई जना साँसद उभिएकै भरमा संसद अवरुद्ध नहुने ?
काठमाडौं, असार २९ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक–दुई जना साँसद उभिएकै भरमा संसद अवरुद्ध हुन नहुने बताउनु भएको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर ३ का सांसदहरुसँग आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
‘एउटा निहुँ झिकेर दुई जना साँसद ठिंग उभिँदा संसदका सबै गतिविधि अवरुद्ध हुनु हुदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेसले झिनामसिना कुरा झिक्ने अनि दुईजना सांसद ठिंग उभिने । अनि संसदको कारबाही अवरुद्ध हुने । अब यस्तो हुँदैन । दुई चार जना मान्छेले गलत नियतले उभिँदा संसद रोकिदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका कुरा, जनताको चासोका कुरा बहस गर्ने थलोलाई कोही मान्छेको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न दिन नहुने पनि बताउनु भयो । ‘हामी दुईतिहाइ बहुमतमा छौं । हाम्रा माननीहरुले विकासका कुरा संसदमा जोडदार उठाउनु पर्छ । आफ्ना अडानमा बसेर कुरा राख्नु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
साँसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले साउन महिनाभित्रै सबै पार्टीका सबै कमिटीहरुलाई पूर्णता दिने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘साउनभित्र पार्टी एकिकरण प्रक्रिया सकिन्छ । त्यसपछि बनेका कमिटीहरुले स्थानीय तहको काममा सहजीकरण, नियन्त्रण र बिकाशको नेतृत्व गर्नेछन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘अहिले पार्टीका कमिटीको अभावमा केही स्थानीय तहमा स्वेच्छारिता आएको सुनिएको छ । अब त्यो रोकिन्छ ।’
सरकार भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्याउनु भयो । सरकार असफल नहुने र जनताको भरोसालाई सधैं शिरोधार्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।
साँसदहरु कृष्ण्भक्त पोख्रेल, रामनारायण विडारी, पार्वत गुरुङ, बिरोध खतिवडा, महेश बस्नेत, कृष्णरज दाहाल, अन्जना बिशंखे, बिमला पौडेल राई, सुजिता शाक्य, कृष्ण राई, हितबहादुर तामाङ, गोमा देवकोटालगायतले समसामयिक राजनीतिक बिषय, जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा उठेका विभिन्न समस्याहरु प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।